Steelie, fijoroana kely indrindra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fahafaha-mitondra ny iPad dia mahatonga ny fitaovana hanatrika ny toerana rehetra ao an-trano. Steelie vaovao fanohanana izay manampy anao hampiasa tsara ny takelaka Apple avy amin'ny latabatrao, ny latabatra ao an-dakozia, na ny faritra marindrano hafa.
Ny fijoroana dia manana rafitra fihodinana izay mamela anao hametraka ny iPad amin'ny orientation rehetra ary koa misafidy ny zoro fijery mety indrindra. Ny firaisana eo amin'ny vatan'ny fijoroana sy ny iPad dia ataon'ny andriamby mba hahafahanao manaraka ny iPad amin'ny faritra metaly hafa koa, toy ny vata fampangatsiahana.
Steelie dia misy amin'ny kinova roa. Ny kely dia natao hampiasaina amin'ny fiaranao ary mitentina 30 $ raha $ 60 kosa ny kinova amin'ny birao. Azonao atao ny mividy mivantana roa ao amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Steelie, fijoroana kely indrindra ho an'ny iPad
Ary io sombin-javatra io, satria miraikitra amin'ny ipad… izy dia andriamby azo apetraka ary esorina isaky ny maniry na mila miraikitra amin'ny fonon'ny ipad. ho antsika izay manana fonony izay tsy maintsy esorina.
Raha misy ny fitadidiana, dia miraikitra amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny andriamby. Ireo mpamorona ny fanohanana dia manome antoka fa ny sahan'andriamby dia tsy hanimba ny fahatsiarovana sy ny efijery an'ny iPad. fiarahabana
Eto Espana aho dia afaka nividy azy tamin'ny vidiny lafo tao http://www.steelie.es ary hatramin'ny nahazoako azy dia tiako izany. Izaho dia mpivarotra ary tsy hadinoko mihitsy ny findaiko. Misaotra amin'ity lahatsoratra ity.
En http://www.yootak.com Hitako fa looooong Best Price. Mora be !!
Tazomy hatrany ny baterinao miaraka amin'ny fonony iWalk
Griffin Twenty, fanamafisam-peo hampifandray ny AirPort Express anao